Kule nqaku siza kusombulula ubundlobongela bezandla, eziza kugcinwa ngokuhlukileyo kwindlobongela yomzimba kunye nogonyamelo lwengqondo.
Ubundlobongela bezithethe, ngokuqhelekileyo nokubhekiselele ekutshutshisweni ngamagama , luhlu oluqhelekileyo lobundlobongela, olubandakanya imilinganiselo eninzi yokuziphatha, kubandakanya: ukugxeka, ukuphazamisa, ukusongela amazwi, ukuyala, ukuhlaziya, ukuhlala ukhohlwa, ukulila, ukugxeka, ukubiza igama, ukugxeka.
Ubundlobongela bemilingo buhambelana nezinye iintlobo zobundlobongela, kuquka ubundlobongela obuphathekayo kunye nogonyamelo lwengqondo. Ngokomzekelo, kwiindlela ezininzi zokuxhaphaza sithola zonke iintlobo zobundlobongela (kunye nobundlobongela bezandla kubonakala ngathi yindlela ebaluleke kakhulu yobundlobongela ukuxhatshazwa - awukwazi ukuxhatshazwa ngaphandle kwesongelo lomlomo).
Njengokuba nobudlova beengqondo , umbuzo ubonakala ukuba zeziphi iintlobo zokuphendula ezinokuthi zithathwa njengezivumelekileyo ngokubhekiselele kubudlova.
Ingaba isisongelo somlomo sinika umntu ithuba lokusabela ngobundlobongela? Sifumana iinkampu ezimbini ezicacileyo apha: ngokweminye, akukho senzo sogonyamelo lwezityholo singasichazela ukuphendulwa komzimba; ngokweminye inkampu, endaweni yoko, ukuziphatha ngento enobudlova kungabonakala kunobungozi, nokuba kungabonakali ngakumbi, kunokuziphatha okubundlobongela.
Imiba yempendulo esemthethweni kwiindlobongela zamagama ibaluleke kakhulu kwiindawo ezininzi zobugebengu. Ukuba umntu usongela ngesixhobo, ngaba loo nto ibalwa njengengozi nje yesandi kwaye ngaba oko kukugunyazisa ukuba uphendule ngokwenyama? Ukuba kunjalo, ngaba usongelo olusemthethweni naluphi na uhlobo lokusabela ngokwenyama kwinqanaba lakho okanye cha?
Ulwaphulo lomlomo kunye nokukhuliswa
Ngelixa zonke iintlobo zobundlobongela zihambelana nenkcubeko kunye nokukhuliswa, ubundlobongela bezandla kubonakala buhambelana neenkcubeko ezingaphantsi ezithile, eziziimpawu zelwimi ezithatyathwe kwiindawo zeentetho. Ngenxa yobume bayo, kubonakala ngathi ulwalamlo lwamazwi lunokugqithiswa lula kwaye lupheliswe ngaphandle kwezinye iindlela zobundlobongela.
Ngokomzekelo, ukuba sishiya isizathu sokuba abanye abantu benze kwaye badinga ukusebenzisa ubundlobongela kunye nokuba sinokuthintela njani ukuba kwenzeke, kubonakala ukuba ulwalamlo lwamazwi lunokulawulwa lula, ngokunyanzelisa ukuziphatha okuhlukeneyo. Ulwaphulo lomlomo lwe-Countenancing, nangaliphi na inqanaba, ludlula ngokusetyenziswa kolunye uhlobo lokunyanzelisa , ukuba nokuba yindlela yokusebenzisa iilwimi kuphela.
Ubundlobongela beNkululeko kunye noKhuseleko
Ngakolunye uhlangothi, ulwalamlo lwamazwi lunokuthi lubonwe ngamanye amaxesha kunye nenkululeko yokukhulula .
Ukusetyenziswa kwamahlazi ngamanye amaxesha kunokwenziwa ngeentlobo zolwaphulo-mlomo: ukusuka kumahlaya angabonakaliyo ngokobupolisa ukuhlekisa, ukuhleka kwezilwanyana kunokubonakala ngathi kwindlela yokusebenzisa ubundlobongela kwabanye abantu. Ngelo xesha, ukuhleka kwezinto phakathi kwezona zinto "zininzi zentando yesininzi" kunye nezixhobo ezintle zokubhikisha kwezenhlalakahle, njengoko kungabi nantoni ethile kwaye kungabikho monakalo emzimbeni kunye nesidingo asibanga kubangele ukukhathazeka kwengqondo.
Ukusetyenziswa kobundlobongela bezityholo, mhlawumbi ngaphezu kweyiphi na inyango yobundlobongela, kufuna ukutshekisha okuqhubekayo kwintetho yesithendeleko emazwini akhe: abantu basondela ngokukhawuleza basebenzisa ubundlobongela; kuphela ngokuzifundisa ukuzama ukuphepha ekuziphatheni ukuba nolwazi lwethu lufumana ulwalamano lokuba sikwazi ukuhlala ngokuthula.
IWedley College Admissions
Imfazwe Yehlabathi II: HMS Nelson
I-A's Season 1 Imiyalezo
Sunnylands, ngo-1966, iKhaya leTyebi kunye neLaziwayo
Uphi i-Uranium efumaneka kwiTable Periodic?
Umdlalo weHarold - Long Form Improv Game
Kutheni i-Cold Weather yenza i-Pee
Ubomi beJosé "Pepe" Figueres
AbaPhambili beBachata abangama-17